राति खाना नखाने बानी छ ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ राति खाना नखाने बानी छ ?
राति खाना नखाने बानी छ ?
भनिन्छ, रातिको खाना हलुका हुनुपर्छ अर्थात् जे खान्छौं त्यो सुपाच्य होस् । तर यसको मतलब यो होइन कि राति खाना नै नखाने । कैयौंपटक वजन बढेपछि अथवा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि राति खाना खान मन लाग्दैन । यो बानीले शरीरमा झनै रोग निम्त्याउँछ । तसर्थ राति हल्का–फुल्का खानेकुरा खानुपर्छ तर भोकै सुत्नुहुँदैन । भोको सुतेपछि कमजोरी हुन्छ र थुप्रै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुन थाल्छ ।
पेट दुख्ने समस्याः राति खाना नखानेहरूलाई पेट दुख्ने समस्या हुन्छ । कैयौंपटक खाली पेट भएको कारण पेटमा ग्याँस बन्छ । यसैले वजन कम गर्ने उद्देश्यले खाना खान चाहनुहुन्न भने फाइबरयुक्त भोजन खान सकिन्छ । यो सजिलै पच्छ, भोकको अनुभूति दिंदैन । काउली, बन्दा, पालक, बथुआ, ओट्स, दलिया, लौका आदि सेवन गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जाको कमीः राति खाना नखानेहरूको शरीरमा ऊर्जाको कमी हुन्छ । यसले शरीरभित्र कमजोरी हुन थाल्छ जसले गर्दा थकान र टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । कमजोरीले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमाथि पनि असर पार्छ, जसले गर्दा तनाव र चिन्ता बढ्ने समस्या हुन सक्छ ।
पोषक तŒवको कमीः खाना छोड्नु कुनै समस्याको विकल्प होइन । यदि प्रतिदिन रातिको खाना त्याग्नुहुन्छ भने शरीरले सम्पूर्ण पोषक तŒव पाउँदैन जसले गर्दा शरीरमा सुगरको लेभल कम हुन्छ । यसले इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ र थुप्रै रोगको शिकार बन्छ । राति निकै जोडले भोक लागेपछि अस्वस्थकर खानेकुरा खाने बानी लाग्छ जसले शरीरलाई बेफाइदा पु¥याउँछ ।
निद्रा लाग्दैनः पेट खाली भएपछि निद्रा पनि प्रभावित हुन्छ । रात बढेपछि तीव्र भोक लाग्छ । यस्तो स्थितिमा हामीले जे पाउँछौं त्यही खान्छौं । भोक लागेपछि मान्छेले केही सोच्न सक्दैन र जे पायो त्यही खान्छ, जुन अस्वस्थकर हुन्छ । निद्रा नलागेपछि चिडचिडापन महसूस हुन्छ, थकान लाग्छ ।
Previous articleअन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग शिविर
Next articleवर्षायाममा दाल सेवन